Ukufumana amanqaku kwiNtlalontle | Martech Zone
Ukufumana amanqaku kwiNtlalontle
NgoLwesibini, Matshi 19, 2013 NgoLwesibini, Matshi 19, 2013 Amol Dalvi
Uninzi lwabathengisi luyakuqonda ukubaluleka kokusebenzisa imithombo yeendaba ekuhlaleni ukuzibandakanya nabathengi, ukwakha ulwazi ngophawu kunye nokuvelisa izikhokelo, kodwa iinkampani ezininzi zisasokola. Uwabandakanya njani amathemba kwinqanaba lomntu, ukubonisa ixabiso lenkampani yakho kwaye ekugqibeleni uwaguqulele kubathengi?
Kwishishini akukho xabiso lincinci ekubeni namawaka wabalandeli be-Twitter ukuba akukho mntu uthenga kuwe. Iyabila ukuya kwimilinganiselo yokulinganisa kwaye ichonge ngokulula ukuba into oyenzayo iyasebenza.
Ekunene kwi-Interactive sigxile ekufumaneni ezona ndlela zokulinganisa impumelelo, kwaye sikwenza ngokwamanqanaba amanqanaba okuzibandakanya. Injini yokufaka amanqaku ekunene ilanda yonke imisebenzi kunye nokunxibelelana okujikeleze uphawu lwakho. Siphawula ukubandakanyeka kwezentlalo.
Makhe sijonge i-imeyile njengomzekelo. Uthumela amathemba akho kwincwadana yakho ye-imeyile yenyanga. Nabani na oyivulayo afumane inqaku. Ukuba bacofa kwikhonkco kwi-imeyile lelinye inqaku. Ukuba undwendwela iphepha lakho lewebhu, bafumana amanqaku amaninzi. Abamkeli abona manqaku maninzi ngabo babandakanyeka kakhulu.
Umdibaniso omtsha we-Twitter izisa umbono ofanayo kwimidiya yoluntu.
Ngokulandela yonke imisebenzi eyenzekayo ejikeleze i-akhawunti yomthengisi we-twitter siyakwazi ukutsala loo msebenzi siye kwiinjini zokufumana amanqaku ekunene kwaye sabele amaxabiso kumanqanaba ohlukeneyo okuzibandakanya.
Kutheni amanqaku e-ROI ekuhlaleni ehlukile
Uninzi lweemveliso zangoku ze-Twitter ngaphandle kweemveliso zesandisi. Uposa into kwiakhawunti yemidiya yoluntu kwaye uyathemba ukuba iza kufumana iimpendulo ukuze ikwazi ukufikelela kubaphulaphuli ababanzi. Kuphantse ukubeka ibhodi yezaziso ecaleni kwendlela enkulu kwaye unethemba lokuba abantu abaninzi bayayibona.
Ekunene kwi-Interactive sigxile ekufumaneni amanqaku kunye nokuzibandakanya, hayi ukukhulisa. Sinomdla wokuchonga kunye nokufumana amanqaku okuthenga. Ngokunceda abathengi babe nengqondo kwimizamo yabo yokuthengisa kwimithombo yeendaba banokukhawuleza babone ukuba zeziphi iindlela zokwenza ezona zisebenzayo.
Inqaku le-ROI yeNtlalontle lenziwa ngokwezifiso ngokupheleleyo
Umdibaniso utsala yonke idatha ejikeleze iakhawunti ye-Twitter njengabalandeli abatsha, ukukhankanywa kwegama, ukubhalwa kwempendulo kunye nemiyalezo ethe ngqo. Nayiphi na yale mi sebenzi inokunikezelwa ngamanqaku okubandakanya, kunye nomthengisi olawula amanqaku. Yenziwe ngokwezifiso ngokupheleleyo.
Umzekelo, umlandeli omtsha unokufumana inqaku elinye. I-retweet inokuxabisa ezimbini. Ukuba umyalezo othe ngqo uhambisa iakhawunti enokuxabisa amanqaku ali-10. Abathengisi banokwabela amaxabiso kwimisebenzi yokuzibandakanya abona ibaluleke kakhulu kwaye iyasebenza.
Ukuchonga iiNkokeli eziShushu ngokufumana amanqaku e-ROI yeNtlalo
Umdibaniso omtsha we-Twitter ngoku yinto esemgangathweni Isoftware yokufumana amanqaku ekunene. Ikuvumela ukuba uguqule abalandeli abangaziwayo babe ngabafowunelwa bokwenyani kwiziko ledatha lenkampani yakho. Ukuqhagamshela unxibelelwano lwenkampani ye-Twitter kunye nendawo yogcino lwedatha ivumela iqela lokuthengisa ukuba liphucule yonke imiba yokuzibandakanya ejikeleze uphawu.
Enye yezinto ezinomdla ngakumbi kunceda abathengisi bachonge izikhokelo ezishushu, ngabo abo basebenzisi benza uninzi lokuzibandakanya kunye nokunxibelelana ngexesha elifutshane. Ngokuchonga abo basebenzisi ngokukhawuleza, uyakwazi ukudlulisa ukhokelo olushushu kwiqela lokuthengisa ngokukhawuleza.
Inye kuphela enye indlela ekunene ekunxibelelaneni ngayo inceda amashishini ukuba enze olona loncedo kwimidiya.
Ekunene kwi-Interactive ngumxhasi weentengiso ozisebenzelayo Martech Zone.
tags: facebook amanqakuukukhokela amanqakuukudibanisa amanqakuithemba lokufumana amanqakuekunene kunxibelelwanoamanqaku ezentlaloamanqaku e-twitter
Ishishini kwiShishini eliNye lokuThengisa
Ukuthengisa ngaphakathi kwiShishini elincinci